Manicure amin'ny fomba fanosotra
Ireo lamaody, akanjo, manikika, ary ny endriny amin'ny fomba fanangonam-bolo eo amin'ny tampon'ny laza eo anivon'ny ankamaroan'ny tanora ankehitriny. Ary ny singa fototra dia ny maha-izy azy, tokana. Ankoatra izany, ireo zazavavy izay manome azy tombontsoa, ​​dia mahafantatra fa amin'ny tarehin-javatra rehetra dia mila mijery 100% ianao, ary midika izany fa tsy maintsy asiana fanaraha-maso amim-pitandremana ny zava-drehetra, anisan'izany ny endriky ny marika.
Manicure hevitra amin'ny fomba tumblr
Ny zazavavy, misolo tena an'io fomba io, dia afaka miantsoana tsara ny fiantsenana. Manahaka azy ireo, ohatra, izy ireo. Araka ny endriny, ny fahasosorana rehetra dia eritreretina, manomboka amin'ny loko ny politique nagy ary mamarana amin'ny loko maivana volamena ary kakazo iray .
Tsara ny manamarika fa ny zavatra tena lehibe amin'ny manika dia ny fantsika amin'ny fanoratana ny fantsika amin'ny akanjo lava, ary ny loko sy ny lokon'ny loko dia mifanaraka amin'ny fironana farany ara-pivelomana.
Geometry . Ny fisian'ny modely tsy voavolavola eo amin'ny fantsika dia iray amin'ireo singa fototra ao amin'io fomba io. Azo atao ny manelanelana, mivangongo, ary diagonaly, zigzags, ratra. Manaova fanandramana amin'ny loko, fa ataovy azo antoka fa toa mifanaraka tsara izy io.
Animalism . Fanontana fanontam-pirinty - izany no fomba ahafahanao miantso ireo sary malaza amin'izao fotoana izao eo amin'ny fantsika amin'ny zazavavy. Noho izany, ny zavakanton'ny fantsika dia mety ho endrika endrika-manahaka ny hoditry ny bibilava, tigra, zebra , jirafy ary solontena maro hafa avy amin'ny biby.
Flowers . Ny lovan-tsofina romantika dia hanome safidy ho an'ny akanjo izay manasongadina ny hakantony sy ny maha-vehivavy azy, ary koa ny manikinera natao tamim-pitandremana sy malefaka. Amin'io tranga io, ny lokon'ny varia dia miankina tanteraka amin'ny toetran'ilay vehivavy lamaody. Mety ho mena mena izy io, ary fotsy matevina .
Hira fisaonana . Ny ankizivavy tsirairay izay manamboatra ny hohony amin'ny fomba fanangonam-bokatra dia mahafantatra fa eo amin'ny tendrony malaza be manga, ary ny loko marevaka indrindra dia manga, volomparasy, burgundy, sôkôla, kafe. Ankoatr'izany, ny manipika velarantany toy izany dia ho fanampim-panazavana amin'ny endrika hafa.
Metallic . Raha nanelingelina ny varimbazaha mainty sy fotsy, dia izao no fotoana hanombohana tumblr-manikika, noforonina miaraka amin'ny fanampiana ny sarimihetsika manokana sy ny biriky mamirapiratra. Anisan'izany ny fiantraikan'ny fitaratra tapaka, izay noforonina miaraka amin'ny fanampian'ny labels manokana, amin'ny lamandy miharo eo amin'ny takelaka fisaka.
Aza hadinoina fa manody iray ao anatin'io fomba io ny ampahany na manontolo ny fomba fiainanao, ny fiadananao anaty, ny toe-tsaina. Tsy maintsy dinihina amim-pitandremana izany. Miandrandra ny famolavolana lamaody amin'ny zavakanto, ny fanandramana amin'ny lokony sy ny endriny.
Ny volo amin'ny vehivavy 2015
Tetezana fohy 2013
Sary tamin'ny fahavaratry ny taona 2014
Fashionable jackets 2013
Fashionable down jacket 2015
Hena amin'ny vatany
Ahoana ny famerenana haingana ny herpes amin'ny fanampiana ny lipaka - fanampiana
Famotehana vatomamy tsy misy fandidiana
Fetsy kiraro 2015
Fety fety ankalamanjana - fomba fanamboarana
Inona no manampy an'i Xenia Petersburg?
Ahoana no fomba fitsaboana azy?
Nandamina fotoam-panatanjahan-tena mahatsikaiky ny vadiny ny lehilahy, ary navoakany ny pensilihazo ho an'ny vadiny.
Urostesan nandritra ny fitondrana vohoka
Malahelo be ny vavako rehefa avy nihinana
Moonstone - famantarana ny zodiaka